Njirimara, arụmọrụ na ịrụ ọrụ nke ikpo ọkụ geothermal | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Portillo nke German | | Ike ikuku
Mgbe oge oyi na-abịa, anyị kwesịrị ikpo ụlọ anyị ahụ ka ọ dịrị anyị mfe. Ọ bụ mgbe ahụ ka anyị nwere obi abụọ banyere okpomoku ụwa, mmetọ, wdg. Site n'iji ike eme ihe na kpo oku. Otú ọ dị, anyị nwere ike ịdabere na ume ọhụrụ nke eji ọkụ ụlọ. Ọ bụ ihe banyere geothermal kpo oku.
Ike nke Geothermal na-eji okpomoku sitere n’uwa mee ka okpomoku oku di elu ma mee ka onodu oku di elu. N'isiokwu a anyị ga-akọwa ihe niile gbasara ikpo ọkụ ọkụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe nke a ike bụ banyere na otú o si arụ ọrụ, na-agụ 🙂
1 Kedu ihe bụ ike nke ikuku?
2 Kedu ka esi eji ike ikuku mmiri eme ihe?
3 Geothermal kpo oku ọrụ
4 Ngwa ike
5 Ihe kwesiri iburu n'uche
Kedu ihe bụ ike nke ikuku?
Ihe mbụ bụ ime nkenke nyocha banyere ihe ike ikuku dị. Could nwere ike ịsị na ọ bụ ike echekwara n'ụdị okpomọkụ n'elu ụwa. Gụnyere okpomọkụ niile a na-echekwa n’ime ala, n’ime mmiri, na okwute, n'agbanyeghị ogo ya, omimi ma ọ bụ mmalite.
Site na nke a anyị maara na oke ma ọ bụ pere mpe anyị nwere ume nke echekwara n'okpuru ala na anyị nwere ike ma ga-erite uru. Dabere na okpomọkụ nke ọ dị, anyị nwere ike iji ya maka ebumnuche abụọ. Nke mbụ bụ inye okpomọkụ (ịdị ọcha mmiri ọkụ, ikuku oyi ma ọ bụ ikpo ọkụ ọkụ). N'aka nke ọzọ, anyị nwere ọgbọ nke ike eletrik site na geothermal.
Ike ikuku ya na obere enthalpy a na-eji ya maka mmepụta nke okpomọkụ na kpo oku. Nke a bụ otu ihe masịrị anyị otu esi amata.
Kedu ka esi eji ike ikuku mmiri eme ihe?
Emere omumu nke kwubiri na omimi nke ihe dị ka mita 15-20, ọnọdụ okpomọkụ na-adịgide adịgide n'afọ niile. Ọ bụ ezie na ọnọdụ okpomọkụ dị na mpụga dịgasị iche, na omimi ahụ ọ ga-adịgide adịgide. Ọ dị ogo ole na ole dị elu karịa nkezi kwa afọ, ihe dịka ogo 15-16.
Ọ bụrụ na anyị agbada karịa mita 20, anyị na-ahụ na ọnọdụ okpomọkụ na-abawanye na gradient nke ogo 3 kwa mita ọ bụla. Nke a bụ n'ihi gradient a ma ama nke ala. N'ihe omimi anyị na-aga, anyị na-abịaru nso na etiti nke ụwa ma na-aga n'ihu site na ike anyanwụ.
Enwere ike iji ike niile dị na ala nke ụwa na-azụ, ìhè anyanwụ na mmiri ozuzo iji gbanwere ha a okpomọkụ nyefe ọmụmụ.
Iji nweta ikike a na-anaghị agwụ agwụ n'oge niile n'afọ, anyị chọrọ njem na mmiri mbufe ọkụ. Can nwekwara ike iji mmiri mmiri dị n'ime ala ma were ọnọdụ okpomọkụ ya.
Geothermal kpo oku ọrụ
Iji mee ka okpomọkụ nke ime ụlọ dịkwuo elu n'oge ụbọchị oyi, anyị chọrọ akụrụngwa nwere ike ịmịkọrọ ike niile foto dị ọkụ weghaara ma nyefee ya na oyi. Ìgwè na-enyere nke a aka Ọ na-akpọ a geothermal okpomọkụ mgbapụta.
Na mgbapụta ọkụ, a na-etinye ume site n'èzí n'èzí ma nwee ike ịfefe ya n'ime. Igwe ndị a n'ozuzu ha na-arụ ọrụ nke ọma ma jiri ya mee ihe na ọnọdụ dị n'èzí, ọ bụrụ na ọ dị mkpa (ọ bụ ezie na ịdị irè ha na-ebelata). Otu ihe a na-aga maka nfuli ọkụ aerothermal. Ha nwere ezigbo mkpụrụ, mana ha dabere na ọnọdụ ihu igwe.
Igwe mgbapụta nke ikuku nke ikuku na-enye uru a na-apụghị ịgbagha agbagha karịa nfuli ọkụ ndị ọzọ. Nke a bụ anụ ụlọ okpomọkụ nke ụwa. Anyi aghaghi iburu n’uche na oburu na okpomoku di n’iru n’aho, oru a agagh adi n’onodu ozo dika odi n’onodu ndi ozo. Ihe bara uru bụ na ọ ga na-adọrọ ma ọ bụ na-enye ike n'otu ọnọdụ okpomọkụ ahụ.
Ya mere, enwere ike ịsị na geothermal mmiri-mmiri ọkụ mgbapụta Ọ bụ otu n'ime akụrụngwa kachasị mma na-ere ahịa na ahịa. Anyị ga - eri naanị ihe mgbapụta nke mgbapụta mgbapụta edl heat transfer fluid fluid (mmiri a bụ isi mmiri nwere mgbochi oyi) yana compressor
Akụrụngwa ike ikuku na-agbanwe ọtụtụ n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya ma na-asọ asọmpi n'ahịa. Enwere ike ịsị na ha nọ n'otu ọkwa dị ka akụrụngwa ndị ọzọ nwere arụmọrụ A + na A ++ maka usoro kpo oku
Enwebeghị ike ọkụ nke ụlọ n'ụlọ. N'ime ụlọ kpo oku enwere ike ịchọta ya dị ka akụkụ nke atụmatụ nchekwa ume. N'ime ngwa nke ike ụwa anyị hụrụ:
Geothermal kpo oku.
Mmiri mmiri dị ọcha.
Ọdọ mmiri ndị a na-ekpo ọkụ.
Ume ala. Ọ bụ ezie na o yiri ka ọ na-emegiderịta onwe ya, mgbe ọ ka dị ọkụ n’èzí, a pụrụ ịtụgharị usoro ahụ. A na-etinye okpomọkụ site na ụlọ ahụ ma hapụ ya ka ọ banye n'okpuru ala. Mgbe nke a mere, okpomoku nke ime ala na-arụ ọrụ dị ka sistemụ jụrụ ajụ dị n'etiti ụlọ na n'èzí.
Nhọrọ kachasị mma na nke kachasị mma bụ ịhọrọ sistemụ ọkụ ọkụ na geothermal kpo oku. Ọ nwere ike ịbụ na mmiri na nrụnye okpomọkụ dị ala ka e wee nweta arụmọrụ kachasị elu. Ọ bụrụ na anyị nwekwara nrụnye ọkụ ọkụ nke ụlọ n'ụlọ, anyị ga-enweta nchekwa ike ma belata oke ikuku CO2 na mbara igwe.
Nke a bu na ike geothermal nwere otutu elele dika:
Dị ọcha ume.
Nfuli ọkụ dị ugbu a nwere ogo arụmọrụ. Usoro oru oma geothermal kpo oku.
Ike imeghari ohuru.
Ihe anwuru CO2 pere ezigbo mpe karia mmanu ndi ozo.
Ike maka onye ọ bụla, n'okpuru ụkwụ anyị.
Na-aga n'ihu ike, n'adịghị ka anyanwụ na ifufe.
Ọnụ ụgwọ dị ala.
Ihe kwesiri iburu n'uche
Tupu ịmalite itinye ụdị nke a n'ụlọ anyị, a ghaghị iburu akụkụ ụfọdụ n'uche. Ihe mbu bu imuta ihe omumu nke aku na uba maka oru ngo a. May nwere ike inwe oke ikuku ọkụ dị na mpaghara gị iji rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ buru ibu, enwere ike ịchọrọ ịmụtakwu ihe gbasara ọdịdị ala.
Ị ga-ama nke ahụ ọnụahịa mbụ nke ụdị echichi a dị ntakịrị karịa, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ vetikal ike kpọọ. Kaosinadị, oge ịkwụghachi ụgwọ dị n’agbata afọ 5 na 7.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịbanye n'ụwa nke ikpo ọkụ geothermal ma nwee uru ya niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike ikuku » Geothermal kpo oku
Ọ na-adọrọ mmasị na usoro ihe a ma kọwaa nke ọma, ekele.
Zaghachi Jose luis Alonso
Kedu ihe bụ ecomobility na otu ọ dịruru mkpa?